အမေရိကန်အလုပ်သမားဈေးကွက်: NFPဒေတာ, အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းထားနှင့် လုပ်ခလစာတိုးတက်မှု အခြေအနေမှတ်တမ်း
အမေရိကန်နိုင်ငံ၏ လစဉ်အလုပ်အကိုင်အစီရင်ခံစာသည် အမေရိကန်စီးပွားရေးအတွက် အလွန်အရေးကြီးသည့်ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ထိုဒေတာကို စက်တင်ဘာလ ၁ရက်နေ့ ၁၅:၃၀ MTအချိန်တွင် ထုတ်ပြန်ပေးသွားမည်ဖြစ်ပါသည်. အမေရိကန်အလုပ်သမားရေးရာဌာနကနေပြီး အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းနှင့် အလုပ်သမားများ၏ လုပ်ခလစာရရှိမှုအခြေအနေများကိုလဲ ထုတ်ပြန်ကြေငြာပေးသွားဦးမှာဖြစ်ပါသည်. NFPဒေတာသည် ယခင်လအတွင်း အမေရိကန်နိုင်ငံအတွင်း အလုပ်အကိုင်မည်မျှအထိ ဖန်တီးပေးနိုင်ခဲ့ကြောင်း ပြသသည့်ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်. ထို့ကြောင့် ယခုဒေတာသည် အမေရိကန်ဒေါ်လာ အပေါ်သက်ရောက်မှုပြင်းသည့် ဒေတာတစ်ခုဖြစ်ပါသည်.
နောက်ဆုံးအကြိမ်ထုတ်ပြန်ခဲ့သည့် အမေရိကန်အလုပ်သမားဈေးကွက်ဒေတာများသည် ဈေးကွက်ကခန့်မှန်းထားသည့်ကိန်းဂဏန်းများထက် ပိုမိုအခြေအနေကောင်းခဲ့ပါသည်. NFPဒေတာအရ အလုပ်အကိုင်ပေါင်း ၂သိန်း၉ထောင်ကျော်အထိ တိုးတက်လာခဲ့ပြီး အလုပ်လက်မဲ့နှုန်းမှာ ၄. ၃ %အထိ ကျဆင်းလာခဲ့ပြီး လုပ်ခလစာရရှိမှုများလည်း တိုးတက်လာခဲ့ပါသည်. ယခုလထုတ်ပြန်မည့်ဒေတာ ဆက်လက်အားကောင်းခဲ့ပါက ဒေါ်လာတန်ဖိုးမြင့်တက်နိုင်ပါသည်. အကယ်၍ NFPဒေတာအားနည်းပြီး လုပ်ခလစာဒေတာများ ကျဆင်းသွားခဲ့ပါက အမေရိကန်ဒေါ်လာ တန်ဖိုးကျဆင်းသွားနိုင်ပါသည်.